Maxaa loo cuskadey xil ka Qaadista Dhooba Dareed? [Muqaal] - Horseed Media • Somali News
Home » Maxaa loo cuskadey xil ka Qaadista Dhooba Dareed? [Muqaal]
Maxaa loo cuskadey xil ka Qaadista Dhooba Dareed? [Muqaal]
November 7, 2019 - Posted by: Omar Mohamed - 1 Comment
Jawaabta dhoobo Daareed.
Abdullahi Abdi says
Waan kaxumahay waxa maanta kadhacay puntlands iyo inuu gaadho dhibkii haystay koonfurta somalia